ओली सरकारले सुनियोजित रुपमा पक्राउ गर्‍यो, देशैभरि प्रतिवाद हुन्छ : रामचन्द्र पौडेल – Koshidaily
access_alarms Koshi daily १७ मंसिर २०७७, बुधबार १३:०९	chat_bubble_outline 0	Comments
१७ मंसिर, पोखरा । ब्यास नगरपालिकाको बुल्दी खोलामा बसेको पुल उद्घाटनका लागि जाने क्रममा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बुधबार पक्राउ परे । व्यास नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिका जोड्न सेती नदीमाथि बनेको पक्की पुल उद्घाटन गरेका पौडेलले ब्यास नगरपालिकामा वडा नम्बर १, १० र ११ जोड्ने तालघरे दुम्सीचौर सडकको बुल्दीखोलामा बनेको पुलको पनि उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो ।
तर संघीय सरकारको बजेटमा बनेको पुल कसले उद्घाटन गर्ने भन्नेमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसबचि विवाद भयो । स्थानीय प्रशासनले पनि झडप हुने सम्भावना देखिएको भन्दै निषेधाज्ञा नै गर्‍यो । तर निषेधाज्ञालाई खारेज गर्छु भन्दै र्‍यालीसहित पुल उद्घाटन गर्न हिँडेका पौडेललाई बुधबार दिउँसो प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर साँझ साढे ५ बजे तिर छाडेको छ ।
पौडेलसँगै प्रदेश सांसद सरिता गुरुङ, तनहुँ कांग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष जीतप्रकाश आले लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ परेका थिए भने धरपकडका क्रममा भएको झडपका क्रममा नेता रामचन्द्र पोखरेल, कांग्रेस तनहुँका सचिव लक्ष्मी आचार्यलगायत केही सामान्य घाइते भएका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले भने आफूलाई सुनियोजित ढंगले नै पक्राउ गरिएको र यसको देशैभरि प्रतिकार हुने बताएका छन् । प्रस्तुत छ, नेता पौडेलसँग अमृत सुवेदीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
स्थानीय प्रशासनले विवाद भयो, पुल उद्घाटनमा नजानुस् भन्दाभन्दै किन जानुभएको ?
हामीले नै बनाएको पुल उपभोक्ता समिति थियो । हाम्रै सरकारका पालादेखि बजेट परेको हो । उपभोक्ता समिति र नगरपालिकाले प्रमुख अथितिका रुपमा पुल उद्घाटन गर्न बोलायो । उनीहरुले सर्वसम्मतिमै नै मलाई बोलाएका हुन् ।
तर हामीले काम गरेको केपी ओलीको सरकारलाई मन परेन र तस्करले प्रशासनलाई हातमा लिएर निषेधाज्ञा गर्‍यो । अधिवायवाद, फाँसीजमतिर यो सरकार अगाडि बढ्यो ।
तर, प्रशासनले त कोरोनाको जोखिमका बेला तपाईले सयौं जनाको जुलुस निकालेर निषेधाज्ञा तोड्नुभयो भनेको छ नि ?
कोरोनाको जोखिमबारे हामी जानकार छौं । सामाजिक दुरी कायम गरेर पुल उद्घाटन गर्ने योजनामा थियौं । कोरोनाको जोखिम नहोस् भनेर सबै प्रबन्ध मिलाएका थियौं । सरकारले त्यसमाथि अवरोध गर्‍यो ।
यो ममाथि फासिस्ट आक्रमण भयो । यो फासिस्ट शैलीको प्रतिरोध गर्छौं । अवैधानिक र कानुन विपरीतका आदेश सहेर बस्न सकिँदैन । देशैभरि प्रतिकार हुन्छ । हामीले सरकार अधिनायकवादमा जान्छ भनेका थियौं, त्यतातिर जान थाल्यो । अब यसविरुद्ध लड्छौं ।
विवाद हुँदाहुँदै पुल उद्घाटन गरेर तपाईले जस लिन हतार गर्नुभयो भन्छन् नि ?
केही तस्करहरुको हातबाट बाँधियो यहाँको प्रशासन । मैले हिजो नै सीडीओलाई पुल उद्घाटनमा जाउँ पनि भनेको थिएँ । बेलुकाबाट त तपाईंले पुल उद्घाटन गर्न पाउनुहुन्न भन्न थाले । हिजोदेखि नै पुलिस राखेर जनता तर्साउने काम भयो । राणा शासनको पालाजस्तो पुलिसले जनता तर्साउने काम गर्‍यो ।
जनताले बोलाएपछि जानुपर्‍यो । त्यहाँको उपभोक्ता समितिले आउनुस् भन्यो । म जनताकै काममा गएको थिएँ । हामी राम्रो काम गरेको यो सरकारले देख्न सकेन । प्रहरी लगाएर टियर ग्यास हान्यो । जुन व्यवहार मसँग गर्‍यो, त्यो अधिनायकवाद हो ।
सरकारले सुनियोजित ढंगले नै पक्राउ गर्‍यो भन्ने तपाईंको दाबी हो ?
केपी ओली सरकारले सुनियोजित ढंगले नै मलाई पक्राउ गरेको हो । यो सरकार फासिजमतिर जान लागेकै हो । केपी ओली कहिल्यै पनि बहुदलका लागि लडेको मान्छे होइन । बीपीको आन्दोलनलाई पनि ओलीले सहयोग गरेको होइन ।
यो परिवर्तनमा केपी ओलीको कुनै हात छैन । तस्करहरुलाई बोकेर पैसाका बलमा केपी ओली नेतृत्वले बहुमत ल्यायो । अहिले यिनैका इसारामा यो काम भइरहेको छ । यो लोकतन्त्रमाथि प्रहार हो, यसको प्रतिवाद देशैभरि हुन्छ । -अनलाईनखबरबाट साभार